राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, मेगा बैंक र एनआईसी एशिया बैंक बाहेक २३ वाणिज्य बैंकद्वारा आईपीओ परे पनि नपरे पनि डरलाग्दो शुल्क असुलीः नेपाल राष्ट्र बैंक बेखबर ? (प्रमाण सहित) - Aathikbazarnews.com राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, मेगा बैंक र एनआईसी एशिया बैंक बाहेक २३ वाणिज्य बैंकद्वारा आईपीओ परे पनि नपरे पनि डरलाग्दो शुल्क असुलीः नेपाल राष्ट्र बैंक बेखबर ? (प्रमाण सहित) -
नेपालमा सञ्चालित २७ वाणिज्य बैंकहरु मध्ये २३ वटा बैंकहरुले सर्वसाधारण जनताबाट कसरी शुल्क असुली गर्दछ भन्ने कुराको उदाहरण बनेको छ डिम्याट खाता भन्दा अब फरक पर्दैन । करोडौं जनताले आईपीओ (साधारण शेयर) भर्ने गर्दछन् । उनीहरुको पैसा बैंक एकाउण्टबाटै काट्ने गरिन्छ । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने हेर्दा त डर लाग्ने शुल्क आईपीओ परे पनि नपरे पनि २३ वटा वाणिज्य बैंकले लिने गरेको फेला परेको छ गभर्नर साब । हेक्का होस् । नेपालका बैंकहरुले आईपीओ भर्दा एक पटकमा १ सय देखि १० रुपैयासम्म शुल्क लिने गरेको भेटिएको छ । यो लुट नभए के हो गर्भनर साब ? नेपालको विदेश लगानी र नेपाली उद्योगपतिहरुको लगानीमा सञ्चालित स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले आईपीओ भर्दा एक पटकमा १ सय लिने गरेको छ भने खेतान समूहको चर्को लगानीमा स्थापना भई सञ्चालनमा आएको लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले २५ रुपैया प्रति आईपीओ भर्दा शुल्क लिएको भेटिएको छ । यो गरिब र निरिह हामी जस्ता जनता माथीको लुट नभए के हो गर्भनर साब ?
आईपीओ परे पनि नपरेपनि शुल्क लिने यी २३ वाणिज्य बैंकहरुलाई जनता ठग्ने अधिकार नेपालको कानुनले दिएको छैन हेक्का होस् ।
नेपालका ४ वटा वाणिज्य बैंक एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड, नबिल बैंक लिमिटेड, मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड र सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले आईपीओ भर्दा डिम्याट खाताबाट पनि शुल्क लिने गरेको छैन । यसको सर्वत्र स्वागत गरिएको छ । यी बैंकले निशुल्क सेवा दिँदै आएका छन् । यी ४ बैंकले निशुल्क सेवा दिँदा अरु २३ वाणिज्य बैंकहरुले दिन सक्दैनन् । गर्भनर साब कारण के हो ? जहाँ पनि निरिह र गरिब जनता माथी लुट यो कस्तो बैकिङ्ग हो यस बारे हामीले खोजी शुरु गरेको छौं । गर्भनर साब ! आइपीओ नपर्नेहरुको शुल्क लिन पाइदैन । यो लुट नभए के हो ? राष्ट्र बैंकले २७ वाणिज्य बैंक मध्ये २३ वाणिज्य बैंकहरुलाई आफू खुशी आस्वा शुल्क असुली गर्न छुट दिएकै हो ? यो कति जायज छ यसको छानवीन राष्ट्र बैंकले किन गर्दैन यसको उत्तर अब अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हामी जस्ता निरिह जनताहरुलाई दिने पो हो कि ? कथा मिठो छ पढौंः–
आस्वा शुल्क अत्यन्त न्यून लिँदा पनि हुनेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसलाई पनि आम्दानीको राम्रो स्रोत भन्दै लुट नै मच्चाएको भेटिएको छ । आइपीओमा आवेदन मोबाइल एप र बेवसाइटमार्फत दिने धेरै छन् । फाराम लिएर बैंक पुग्ने घटेका छन् । न कागज खर्च हुन्छ, न त धेरै जनशक्ति, सफ्टवेयरमार्फत गरिने कारोबारको हिसाबकिताबमा पनि आस्वा शुल्क घटाउनेतर्फ वित्तीय संस्था मौन देखिन्छन् ।
फलानोको आइपीओ खुलेको छ, भर्नुभो ?’ डिम्याट खाताको लगातार बढ्दो संख्यासँगै यो प्रश्न अब नेपाली समाजमा सामान्य बनेको छ । प्रत्येकजसो परिवारमा सेयरबारे धेरथोर जानेकाहरु भेट्न गाह्रो छैन । कम्पनीहरुले आइपीओ निष्काशन पनि बराबरजसो गरिरहेका छन् । तर, सीमित संख्यामा जारी हुने आइपीओ मागका तुलनामा हात्तीको मुखमा जीरा बराबर भइरहेको छ । मागभन्दा कयौं गुणा बढी आवेदक हुने गरेका देखिन्छ । जहाँ १० कित्ता आइपीओ पर्नु आफूलाई ठूलो भाग्यशाली ठान्नुपर्ने अवस्था छ, त्यही हात खाली हुनेहरु गुनासो गर्छन्– डिम्याट खाता खोलिदिएका वित्तीय संस्थाले आस्वा शुल्क मनपरी काटे । कुनै पनि कम्पनीको आइपीओमा २÷३ गुणा बढी आवेदक हुनु अनौठो होइन, प्रविधिको सहजताका कारण हिजोआज मागभन्दा ९०÷९२ गुणासम्म बढीले भर्छन् यसबाट २३ वाणिज्य बैंकले डरलाग्दो शुल्क असुली रहेको भेटिएको छ गर्भनर साब ?
हात खाली हुनेको संख्या अत्यधिक हुने गरेको छ । आस्वा शुल्क अत्यन्त न्यून लिँदा पनि हुनेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसलाई पनि आम्दानीको राम्रो स्रोत भन्दै लुट नै मच्चाएको भेटिएको छ । आइपीओमा आवेदन मोबाइल एप र बेवसाइटमार्फत दिने धेरै छन् । फाराम लिएर बैंक पुग्ने घटेका छन् । न कागज खर्च हुन्छ, न त धेरै जनशक्ति, सफ्टवेयरमार्फत गरिने कारोबारको हिसाबकिताबमा पनि आस्वा शुल्क घटाउनेतर्फ वित्तीय संस्था मौन देखिन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक बोल्दैन गर्भनर साब कारण के हो ? नेपालका २७ वाणिज्य बैंकहरुमा हाल सम्म ५१ लाख ५० हजारभन्दा बढी डिम्याट खाता खोलिएका छन् । यिनमा आधाभन्दा बढीले अनलाइनमार्फत सेयर कारोबार गर्छन् । जसले गर्दा अहिले एउटै कम्पनीको आइपीओमा २५ लाखभन्दा बढी आवेदन पर्न थालेको देखिन्छ । आफूले खरिद गर्न चाहेको आइपीओको रकम बैंक खातामा निश्चित अवधिका लागि रोक्का राखिन्छ ।
प्रतिपटक १०० रुपैयाँ आस्वा शुल्क लिने बैंक स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड हो भने नेपाल एसबिआई, लक्ष्मी, सनराइज र सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले २५ रुपैयाँ लिने गरेका छन् । यस्तै ग्लोबल आईएमई बैंकले आस्वावापत १५ रुपैयाँ लिने गरेको भेटिएको छ । पछिल्लो समय तारन्तार आइपीओ निष्काशन भइरहेको छ । तर, सेयर बजारमा लगानीकर्ताको संख्या बढ्नुका साथै आवेदकको संख्या बढेपछि लाखौं लगानीकर्ताको हात खाली हुने गरेको छ ।
यसरी आइपीओ भर्दा रकम रोक्का हुने र सेयर परेमा सम्बद्ध कम्पनीलाई पैसा ट्रान्सफर गर्दा छुट्टै सेवा शुल्क २३ वाणिज्य बैंकहरुले लिएर लुट मच्चाएको भेटिएको छ । यो शुल्क सेयर कारोबारीको बैंक खाताबाटै काटिन्छ, जसलाई सी–आस्वा भनिन्छ । जसका लागि कुनै बैंकले निश्चित रकम लिने गरेका छन् भने ४ वटा वाणिज्य बैंकहरुले निःशुल्क सेवा दिइरहेका छन् । अझ आइपीओ भर्दा तपाइको खातामा आस्वा शुल्क तिर्ने रकम छैन भने आवेदन नै रद्द हुन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । गर्भनर साब यो कस्तो बैकिङ्ग हो ? नेपालमा सञ्चालित २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु छन् । ती मध्ये नबिल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडमा बैंक खाता भएका लगानीकर्ताले सी–आस्वामा शुल्क तिर्नुपर्दैन । तर बाँकी २३ बैंकमा खाता भएर आइपीओ आवेदन दिएका लगानीकर्ताले १० रुपैयाँ १५ रुपैयाँ देखि १०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिएर लुट मच्चाएका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।
९ वटा बैंकले १० रुपैयाँ, ८ वटाले २०, ४ वटाले २५, एउटाले १५ र अर्को एउटा बैंकले १०० रुपैयाँसम्म लिने गरेको भेटिएको छ गर्भनर साब ?
प्रतिपटक १०० रुपैयाँ आस्वा शुल्क लिने बैंक स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड हो भने नेपाल एसबिआई, लक्ष्मी, सनराइज र सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले २५ रुपैयाँ लिने गरेका छन् । यस्तै ग्लोबल आईएमई बैंकले आस्वावापत १५ रुपैयाँ लिने गरेको भेटिएको छ ।
पछिल्लो समय तारन्तार आइपीओ निष्काशन भइरहेको छ । तर, सेयर बजारमा लगानीकर्ताको संख्या बढ्नुका साथै आवेदकको संख्या बढेपछि लाखौं लगानीकर्ताको हात खाली हुने गरेको छ । तर, २३ बैंकहरुले आम्दानीको खेती गर्दै शुल्क लिएर लुट नै मच्चाएका छन् । यसबारे राष्ट्र बैंक बोल्नु पर्दछ कि पर्दैन, अर्थमन्त्रीज्यू ?
सात अर्ब रुपैयाँबराबरको आईपीओ सेबोनको पाइपलाइनमा
करिब ५२ करोड जरिवाना माग दाबीसहित १० जनालाई मुद्दा दायर
सांग्रिला बैंकको ऋणपत्र (डेबेञ्चर) नेप्सेमा सूचीकृत
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक डुवाएका जीवन भट्टराई युनाईटेड इस्योरेन्सको सीइओ बन्दै ?